dagaal dhexmaray laba maleeshiyo beeleed | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta dagaal dhexmaray laba maleeshiyo beeleed
dagaal dhexmaray laba maleeshiyo beeleed
Masuuliyiin ka tirsan xildhibaanada Galmudug oo qaarkood dhaawacyada ka soo qaaday degaanka Dac-dheer ayaa waxa ay sheegeen in isbitaalada guud ee degmooyinka Cadaado iyo Caabudwaaq ay yaallaan dad dhaawacyo ah oo rayid iyo dhinacyada dagaalamay isugu jira.
Inta la xaqiijiyay dagaalkan ilaa hadda waxaa ku geeriyootay Sideed qof halka ay ku dhaawacmeen 20 kale, sida ay inoo sheegeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug.
Galmudug ayaa ciidan nabadeyn ah waxa ay u dirtay degaanka uu dagaalka ka dhacay, waxayna halkaasi u tagayaan sidii ay u kala dhexgali lahaayeen dhinacyadan dagaalamay.
Degaanka Dac-dheer ayaa waxaa dhawaan ka baxay ciidanka Liyuu boolis ee ismamulka Soomaalida Itoobiya oo kol hore si qasab ah uga barakiciyay dad xoolo dhaqato ah oo halkaasi ku sugnaa.
DHAGEYSO:-Warka Duhurnimo Radio Baidoa 05-8-2021